Ngaphandle | December 2021
Iibanana zeBlue Java Banambitha NjengeCream Cream-Indlela yokutyala iBanana eBanana Java
I-Blue Java Bananas yaziwa ngokuba yi 'ice cream bananas' kuba banombala ococekileyo kunye nencasa ekhumbuza ngokungaqhelekanga i-vanilla custard okanye i-soft service, ngokutsho kwe-Fast-Growing-Trees.com.
Isikhokelo kwiiParches eziHlaziyiweyo- Ungayakha njani i-Porch e-Screened, ngokweeNgcali
Sathetha neenzuzo zokufunda indlela yokwenza umoya opholileyo kodwa okwangoku upeyintiweyo-kuvaranda-ekuza kuba ligumbi lakho olithandayo endlwini.
Iibhalbhu ezili-10 ezilungileyo zokutyala ekwindla- Nini kwiibhalbhu
Ukuba uphupha ngegadi eluhlaza entwasahlobo, kuya kufuneka utyale iibhalbhu ezi kuwa. Ezi zi-10 zeebhalbhu ezilungileyo zokutyala iintyatyambo ezintle zentwasahlobo.
Iimbono ezingama-29 zangasemva kweYadi- Iingcebiso ngokuLowa komhlaba ezilula kwiiYadi ezincinci
Indawo encinci yangasemva iyiyadi yangasemva. Awudingi indawo enkulu yolonwabo lwangaphandle. Khuthazwa zezi zimvo zincinci zingasemva kwama-29 zokwenza uninzi lwakho.
Imithi eyi-18 ehamba phambili yangaphakathi kuyo yonke into yoTyala loMzali
Funda malunga nemithi efanelekileyo yangaphakathi kunye nendlela yokuyinyamekela. Nokuba unobuhle kumdlalo ophucukileyo okanye uphumelele ngaphaya kwesityalo sendlu esithobekileyo, imithi yangaphakathi izakulunga ngaphakathi ngaphakathi.
Idepho yasekhaya ithengisa ukuLungele ukuTyala iCherry Blossom Trees nge $ 39 nje
Ilanga ekugqibeleni liyakhanya, isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye iqondo lobushushu liqala ukuphakama, nto leyo enokuthetha into enye-intwasahlobo ikhule ngokusemthethweni. Ukufika kwentwasahlobo kuthetha ukuba sikufutshane nehlobo, kodwa ikwabonisa elinye ixesha elibaluleke kakhulu enyakeni — ixesha apho iintyatyambo ziqala ukudubula kwihlabathi liphela. Kwabo bafuna ukugcwalisa iiyadi kunye neegadi zabo ngeentyatyambo zasentwasahlobo, musa ukujonga phambili. I-Depot yaseKhaya ngoku ithengisa imithi ye-Kwanzan yeentyatyambo zeentyatyambo nge- $ 39 kuphela-ke kungcono wenze ngokukhawuleza.
I-31 eqaqambileyo ye-Balcony yokuhombisa iiNgcono- Iingcebiso zoYilo lweBhalkhoni
Ukuba ujonge izimvo zokuhombisa i-balcony, sukujonga ngakumbi kule mizekelo yendawo yangaphandle, ukusuka kule mihla ukuya kwezothando. Nantsi indlela yokuhlaziya ibhalkhoni yakho.
Iingcamango ezingama-30 zePlani yeNdlu yoLuhlu oluVakalelwa njengeKhefu
Ezi zimvo zingama-30 zendlu yoyilo ziya kwenza ukuba ikhaya lakho lilungele ukonwabisa ehlobo kwaye zikuse kwiholide yengqondo.
I-17 yeeNdawo eziBucala eziBucala eziBiyelweyo kwiSimbo ngasinye kunye neMfuno
Funda malunga nemibono elishumi elinesixhenxe yangasese yangasese yangasemva kwayo yonke indlela yesitayela kunye neemfuno zokhuseleko.
Iingcamango ezi-14 eziPhambili zePatio-Iindlela eziMnandi zokuGubungela iPatio yakho
Ukusuka kwi-pergolas ukuya eluphahleni olushushu, fumana izimvo ezi-14 ezigubungela iipatio eziza kukunceda uhlale upholile emthunzini kwaye uxhome ngaphandle imini yonke.
I-16 yeeDrafti eziLungileyo zeNdlela yokuDala kunye neePavumente kulo lonke uhlobo lweNdlu-Indlela yokuHombisa iDriveway yakho
Ukusuka kwilizwe elide ukuqhuba ukuya kwiigaraji zedolophu ezijonga ezitalatweni, ezi mbono kunye noyilo lweendlela zokuqhuba ziya kukuhambisa kwicala elifanelekileyo lokuqhuba isibheno sakho sokunqanda.
Iingcamango ezili-15 eziKhanyayo zokuKhanyisa ngaphandle
Sijonge izimvo zokukhanyisa ngaphandle ezinesitayile ezili-15 ukuze ubone ngokucacileyo kwiyadi yakho yangasemva, iveranda, okanye i-balcony oasis akukho xesha losuku okanye lonyaka.
Imibono engama-25 yePhuli yedesika yokuHamba ehlotyeni- Uyilo lwedike yePhuli
Ezi zimvo zindawo yokukhuthaza iphuli ezivela kubaqambi kunye nabayili bezinto zokudibanisa izinto ezinokuhonjiswa ngesitayile, ukukhanya kwepatio, kunye nokunye.
13 Umhombiso oMhle kakhulu woMnyango wokuBulela-ukuNgaphandle kweNgcebiso yokuHombisa
Cwangcisa ithoni yexesha lokunika ngezi zinto zilishumi elinesithathu zemibulelo yomnyango wombulelo kunye neengcebiso zesitayile.
ICypress Valley Canopy Tours yindawo ekuhlala kuyo umthi kunye neZip-Lining Resort
Ukuba uhlala uchitha ubusuku phantsi kweenkwenkwezi-kwaye phezulu emithini-iCypress Valley Canopy Tours ineendawo zokungcebeleka ezinamaphupha ezixhonywe ngaphezulu komhlaba ezithatha isiko lokuqaqambisa inotshi. Ifumaneka kanye ngaphandle kweAustin, eTexas, indawo yokuphumla yaqala njengepaki ye-zip-lining adventure ngaphambi kokuba yongeze amakhaya abo amisiweyo.
Iindidi ezili-14 eziGqwesileyo zamachibi okuqubha angaphantsi komhlaba-ngaphakathi kuyilo lweephuli
Ipuli yokuqubha eyadini yakho kukutyala imali kwindlela ophila ngayo. Kodwa ngaphambi kokuba uqale ukufaka, yazi zonke iintlobo zamachibi apho.
Iqela lePikniki elihombisa imixholo kunye nemibono
Ukusuka kwimibala yegadi ukuya kwiindawo ezishushu zetropiki, ezi mbono zokuhombisa zangaphandle kunye nemixholo yepaki yepaki ephefumlelwe ziitafile zoyilo zinxiba nayiphi na ingca yakudala.
Kutheni iiYurts zaseYadini zisenzelwa iNdlu yeeNdwendwe ekulula ukuYifaka
Sathetha nomsunguli woNyango lweeNdawo uMaxwell Ryan ukuba sifunde ukuba kutheni iiyurts ezisemva kwezindlu zisenza ezona ndlu zibalaseleyo, indlela yokuyibeka kunye nendlela yokuyibeka.
Indlela yokutyala i-Daffodils -Ukhathalelo lweBhalbhu yeDaffodil
Ungayityala njani i-daffodil bulbs ukuwa kombala wasentwasahlobo minyaka le, kwaye kufuneka wenze ntoni ukugcina iintyatyambo zikhangeleka zilungile minyaka le.
Uyibeka njani iSod-inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokufundisa ngokufaka iSod ngokwakho
Ngaba ufuna ingca entsha ngokungxama okanye udinwe nje ngamabala angenanto? Zama ukubeka i-sod ngokwakho. ISod yindlela ekhawulezayo yokuseka ingca kunye nokupakisha iindawo ngokufanelekileyo, utsho uClint Waltz, PhD, ingcali eyandisiweyo ye-turfgrass kwiYunivesithi yaseGeorgia iTurfgrass Research & Education Centre. Ukuba awoyiki ukubila okuncinci, nantsi indlela yokubeka isod eya kukhula.
imibono yokuhombisa indlu encinci
oobawo izipho ngosuku ntombi
Ipropathi engaphambi kolwandle iyathengiswa